ဥရောပ တိုက်၌ ယဉ်ကျေးမှု ပေါ်ထွန်းရာ ဇစ်မြစ် ဒေသ ဂရိ (Greek) နိုင်ငံသည် ရှေးအခါက ယဉ်ကျေးမှု အရာတွင် ထိပ်တန်းသို့ ရောက်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့အနောက်ပိုင်းဒေသ ယဉ်ကျေးမှု၏ အရင်းခံမှာ ဂရိယဉ်ကျေးမှုဖြစ်၏။ ဒီမိုကရေစီဝါဒသည် ဂရိတို့ထံမှ ဆင်းသက်သောဝါဒဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာ အဝဝမှာလည်း အတွေးအခေါ် အမြော်အမြင်ရင့်သန်သော ဂရိပညာရှင်တို့၏ ကျေးဇူးကြောင့်ထွန်းကားလာခြင်းဖြစ်၏။
• လွတ်လပ်ရေး ကြေငြာ (အိုတမန် အင်ပိုင်ယာမှ)
၁ ဇန်နဝါရီ ၊ ၁၈၈၂
၃ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၁၈၃၀
၁၁ ဇွန်၊ ၁၉၇၅
၅၀,၉၄၄ စတုရန်းမိုင် (၁၃၁,၉၉၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ) (အဆင့်: ၉၆)
၁၁,၃၀၅,၁၁၈ (၂၀၁၀) (အဆင့် - ၇၄)
၈၅.၃/km² (၂၂၁.၀/sq mi) (အဆင့် - ၈၈)
၃၁၈.၀၈၂ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၃၇)
US $၂၈,၄၃၄  (အဆင့် - ၂၉)
ထိုပွဲသို့ ဂရိကျွန်းဆွယ်အရပ်ရပ်မှ လူများလာရောက်၍ ပါဝင်ဆင်နွှဲကြ သည်။ သူတို့သည် ကျန်းမာရေး၌သာ စိတ်ပါဝင်စားကြသည် မဟုတ်။ ပညာရေးကိုလည်း အထူးဂရုစိုက်ကြ၏။ မြို့ထဲ၌ နိုင်ငံရေး ပညာနှင့် ယထာဘူတပညာရပ်များကို ဝိုင်းဖွဲဲ့၍ ဆွေးနွေးလေ့ရှိကြ၏။ အချို့ကလည်း မြို့ရွာကောင်စီ၌၎င်း၊ တရားရုံးတော်များ၌၎င်း လူကြီးအဖြစ်ဖြင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက် ကြ၏။ ထိုဂျူရီလူကြီးနှင့်ကောင်စီလူကြီးတို့ကို ဆင်းရဲသားများ ထမ်းဆောင်သော အခွန်ငွေဖြင့် နေ့စဉ်အခကြေးငွေပေးကြရ၏။ အေသင်နိုင်ငံမှာ အင်ပိုင်ယာကြီးဖြစ်သွားသော်လည်း စပါးတားနိုင်ငံသားတို့က အေသင်နိုင်ငံသားတို့ကို မကျိုးနွံ ကြချေ။ ယင်းတို့မှာ ယခင်ကကဲ့သို့ အချင်းချင်း စောင်နေကြ ရာမှ ကြာသော်ထ၍ တိုက်ကြလေသည်။ ထိုအေသင်နှင့် စပါးတားတို့ တိုက်ကြသော စစ်ပွဲများကို 'ပယ်လိုပွန်နီရှင်း စစ်ပွဲ'ဟု ခေါ်၏။ ပဲရီးကလီးသည် သူ့လူများအား အေသင် မြို့ထဲ၌ နေထိုင်စေ၍ ခံစစ်ကိုသာဆင်၏၊ စပါးတားတို့သည် လည်း မြို့ကို ဝန်းရံထားလေသည်။ မြို့ထဲ၌ လူများပြွတ်သိပ် နေထိုင်ကြသဖြင့် မကြာမီ ပလိပ်ရောဂါဖြစ်ပွားပြီးလျှင် လူ အမြောက်အမြားသေဆုံးလေသည်။ ပဲရီးကလီးလည်း ပလိပ် ရောဂါနှင့် သေဆုံးလေသည်။ သို့ရာတွင် ကြွင်းကျန်သော လူများသည် ဆက်လက်၍ ဇွဲနှင့်ကြံ့ကြံ့ခံနေကြ၏။ သို့နှင့် ၁ဝ နှစ်ကြာသောအခါ မည်သူမျှမနိုင်ဘဲ စစ်ပွဲပြီးဆုံးသွားတော့၏။ သို့သော် ပဲရီးကလီးခေါင်းဆောင်မှုဖြင့် တည်မြဲခဲ့သော အေသင်တို့၏လွတ်လပ်ရေးမှာ သူ၏တူ အယ်လစီဗိုင်းအား ဒီး၏မိုက်မဲဲမှုကြောင့် ဆုံးရှုံးရလေသည်။ အယ်လစီဗိုင်းအားဒီးက တိုက်တွန်းသဖြင့် အေသင်နီးယန်းတို့သည် စစ္စလီကျွန်းကို တိုက်ခိုက်ရန် သူတို့ရေတပ်ကို စေလွှတ်လိုက်ရာ ရေတပ်မှာ မရှုမလှချေမှုန်းခြင်းခံရ၍ အေသင်စစ်သုံ့ပန်း အမြောက်အမြား ကျွန်အဖြစ်ဖြင့် ရောင်းချခြင်းခံကြရ၏။ သို့နှင့် အေသင်၏ ဩဇာခံ ဂရိနိုင်ငံငယ်များသည် အေသင်ကို တော်လှန်၍ စပါးတားနှင့်ပူးပေါင်းကြလေသည်။ စပါးတာတို့လည်း ဘီစီ ၄ဝ၅ ခုနှစ်၌ ကြွင်းကျန်သော အေသင်သင်္ဘောများကို တိုက် ခိုက် သိမ်းယူ၍ အေသင်မြို့ကို ဝန်းရံထားကြ၏။ အေသင် တို့ အစာငတ်မခံနိုင်သဖြင့် ဘီစီ ၄ဝ၄ နှစ်တွင် အညံ့ခံ၍ အေသင်အင်ပိုင်ယာကြီး ပျက်စီးသွားရလေသည်။
၁၈၃၂ ခုနှစ်တွင် ဂရိပြည်၌ အကြီးအကျယ် ဆူပူမှုများ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ ရုရှတို့က ဘာဗေးရီးယား မင်းသား အော့တိုးကို ဂရိဘုရင်အဖြစ် တင်မြှောက်ကြသည်။ အော့တိုးသည် ဂျာမန်တို့အကြံပေးချက်အရ ဂျာမန်စနစ်အတိုင်း အုပ်စိုးသဖြင့် ၁၈၆၂ ခုနှစ်တွင် ဂရိတို့ပုန်ကန်ထကြွပြီးလျှင် သူ့ကို နန်းမှချကြသည်။ နောက်တစ်နှစ်၌ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှ ဂျော့မင်းသားနန်းတက်၍ ၁၉၁၃ ခုနှစ်တွင် အသတ်ခံရသည်။ ၁၈၆၄ ခုနှစ်၌ ဗြိတိန်က ဂရိနိုင်ငံအား အိုင်အိုးနီးယန်းကျွန်း များကို ပေးသည်။ ၁၉၁၆ ခုနှစ်၌ ဂရိနိုင်ငံရှိ မီးရထားလမ်း များကို အခြားဥရောပ မီးရထား လမ်းများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း ပြီးစီးသွားသည်။
ဂရိနိုင်ငံသည် စတုရန်းမိုင် ၅၁၂၄၆ မိုင်မျှသာ ကျယ်ဝန်း၍ မြန်မာနိုင်ငံထက် များစွာငယ်သည်။ တိုင်းပြည်၏ အဓိက လုပ်ငန်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အများအားဖြင့် ရှေးရိုးစနစ်အတိုင်း လုပ်ကိုင်ကြသဖြင့် အသီးအနှံ ကောင်းစွာမဖြစ်ထွန်းဘဲ နိုင်ငံခြားမှ စားကုန်များကို မှာယူရသည်။ ဂရိနိုင်ငံမှ စပျစ် ခြောက်၊ သံလွင်ဆီ၊ ဝိုင်အရက်၊ အထည်အလိပ်၊ သားရေ ပစ္စည်း၊ စက္ကူနှင့်မင်ထွက်သည်။ ဆိပ်ကမ်းကြီးများ၌ သင်္ဘော များ ဆောက်လုပ်၏။ ဂရိတို့သည် အရောင်းအဝယ်ဖက်၌ ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်၍ မြေထဲပင်လယ်တစ်ဝိုက်၌ ကုန်သင်္ဘော များဖြင့် ဥဒဟို သွားလာကူးသန်းကြသည်။ ဂရိနိုင်ငံ၏ မြို့တော်မှာ အေသင်မြို့ဖြစ်၏။ ဂရိနိုင်ငံ၌ ဂရိတို့အပြင် အယ်လဗေးနီးယန်းနှင့် ဆလဗလူမျိုးများလည်း နေထိုင်ကြ၏။ ဂရိတို့မှာ အယူမှန်ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။
၁၉၆၇ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၃ ခုနှစ်အထိ ကာလအတွင်း ဝန်ကြီး ချုပ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ နောက်ပိုင်းတွင် သမ္မတအဖြစ်လည်း ကောင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့၍ ဂရိနိုင်ငံ၏ အာဏာရှင်ဟု ထင်ရှား ခဲ့သူ ဂျော့ ပါပါဒိုပေါလို့စ်က အီးပီအီးအင်န်ကို ဦးဆောင် သည်။ သို့သော် ပါပါဒိုပေါလို့စ်သည် နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုဖြင့် ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် သေဒဏ်ချမှတ်ခံရပြီးမှ တစ်သက်တစ်ကျွန်း အပြစ်ဒဏ်သို့ လျှော့ပေါ့ခံရ၍ ယင်းအပြစ်ဒဏ်ကို ကျခံနေရသူ ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ ရွေးချယ် တင်‌ေမြှာက်ခြင်းကို အသိ အမှတ်ပြုရန် ကွန်ဆာဗေးတစ်အုပ်စုက ငြင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ဆာဇက်တကစ် သည် နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ဘဲ တရားဥပဒေရေးရာ ကျွမ်းကျင် သူဖြစ်သည်။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်က လုပ်ကြံမှုတစ်မှုကို ရဲရင့်တည် ကြည်စွာ စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့၍ ထင်ရှားခဲ့သူဖြစ်သည်။ မှုခင်း စီရင်ရာတွင် တရားသောဘက်မှ ရပ်တည်သူဖြစ်၍ ရာထူးလက် လွှတ်ခဲ့ရပြီးမှ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် တရားသူကြီးအဖြစ် ပြန်လည် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသူ ဖြစ်ရာ ဂရိပြည်သူတို့၏ ယုံကြည်ကိုးစားမှု ခံရသူဖြစ်သည်။
ဒေါ်လာသန်း ၂ဝဝ ကျော်အလွဲသုံးစား လုပ်ထားသော ဂရိဘဏ်အရှုပ်တော်ပုံတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု သင်္ကာမ ကင်းခံရသည့် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းပါပန်ဒရီယိုကို စုံစမ်းစစ်ဆေး အရေးယူရန် ဂရိပါလီမန်က ၁၉၈၉ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့ တွင် ထောက်ခံမဲ ၁၇၁ မဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ ၁၂၂ မဲဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ သည်။ ပျက်ကွက်မဲနှင့် ဗလာမခုနစ်မဲရှိသည်။ ယင်းအရှုပ်တော်ပုံ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ပါပန်ဒရီယို၏ ထိပ်တန်းဝန်ကြီး ဟောင်းလေးဦး ကိုလည်း အဖွဲ့ဝင် ၁၂ ဦးပါ ကော်မတီက စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကို လည်းယင်းဝန်ကြီးဟောင်း တစ်ဦးချင်းအလိုက် အမည်တင်သွင်း ၍ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Total Population။ Eurostat (1 January 2010)။ 8 January 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Greece။ International Monetary Fund။ 26 April 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wikimedia Commons ရှိ ဂရိနိုင်ငံ နှင့်ပတ်သက်သော မီဒီယာများ
Wikivoyage ရှိ ဂရိနိုင်ငံ သို့ ခရီးသွားလမ်းညွှန်များ
"Greece"၊ Encyclopaedia Britannica .
"ဂရိနိုင်ငံ"၊ ခရီးသွား (လမ်းညွှန်)၊ National Geographic .
"Greece"၊ UCB Libraries GovPubs၊ Colorado၊4March 2016 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး၊ 26 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး .
"Greece"၊ BBC News (profile)၊ UK၊ 25 December 2013 .
Hellenic History၊ GR: FHW .